13/03/2018 - Page 2 sur 5 -
Soavimasoandro : Nidoboka am-ponja ilay adala nahafaty olona
13/03/2018 admintriatra 0
Taorian’ny nitondrana ny raharaha teo anatrehan’ny fampanoavana ny faran’ny herinandro lasa teo, dia fantatra fa nadoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay lehilahy voalaza fa tsy salama saina nahafaty tovolahy 20 taona teny Soavimasoandro. Talohan’ny nanolorana …Tohiny
Tafapetraka ny » pont Bailey » : Misokatra ny lalan’Ambilobe
Tsy lany henatra. Vokisan’ingahy Andry Rajoelina, filohan’ny Tetezamita teo aloha, lainga marivo tototra indray mantsy ny vahoakan’Ambilobe tamin’ny fitsidihana nataony tany an-toerana, ny herinandro lasa teo. Nambarany tamin’ny kabary avokoa mantsy izao fampanantenana izay tsy …Tohiny
Fanamparam-pahefana : Polisy niakatra fitsarana
Polisy iray voarohirohy tamin’ny resaka fanamparam-pahefana no niakatra teo amin’ny lapan’ny fitsarana tetsy Anosy, tao amin’ny efintrano N°1 omaly tamin’ny 01 ora tolakandro. Anio amin’ny lera tsy miova kosa no hivoaka ny didy mahakasika izay …Tohiny
Valanaretina : Efa azo alevina ampasan-drazana ireo matin’ny pesta
Niteraka olana teo amin’ny fianakavian’ny olona matin’ny pesta sy ny Fitondram-panjakana ny tsy fandevenana ireo olona matin’ny aretina pesta, indrindra nandritra ny fiparitahan’ny pesta aretin-tratra farany izay namoizana ain’olona maherin’ny 200 sy nahitana tranga maherin’ny …Tohiny
Olona valo hatreto no voasambotry ny zandary teto Antsirabe vokatry ny velam-pandrika natao tamin’ireo mpanao aferana-basy. Tratra niaraka tamin’izy ireo ihany koa ny basy poleta vita gasy miisa 7 miaraka amina bala 9mm miisa 20. ...Tohiny